Ezempilo Nobuhle Franchise - Izakhiwo ezithengiswayo | Franchiseek
Ezempilo Nobuhle Franchise
»Amathuba weFranchise»i-United Kingdom»Ezempilo Nobuhle Franchise
Okufakiwe Ezempilo Nobuhle Franchises
Ama-Franchise ezempilo akamuva nobuhle
Eminyakeni edlule kuye kwaba nesidingo esiphakeme sezinsizakalo zezempilo kanye nezobuhle nokwelashwa. Kusukela kulezi zinsuku abantu abafuni ukubukeka bekulungile bafuna ukubukeka behle kakhulu. Ngakho-ke namuhla ngizofaka uhlu lwamaqiniso ngezansi ukukukhombisa amandla aphelele imboni yezempilo nezobuhle onayo futhi futhi manje kungaba isikhathi esifanele sokutshala imali.
Izibalo ezizungeze imboni yezempilo nobuhle.
Manje sizoklelisa izibalo ezimbalwa ezizungeze imboni yezempilo nobuhle eqoqwe eminyakeni edlule. Umgomo wethu ukuqinisa noma ngubani obheke ukutshala imali kwezempilo & nobuhle. Ngoba jikelele ukukhula ngonyaka kukhombisa ukuthi kuyimboni ethokozisayo ukujoyina.
Wonke umuntu uchitha cishe amaRandi ayi-113 njalo ngonyaka kuhlobo oluthile lokuphathwa komuntu siqu noma umkhiqizo embonini yezobuhle.
Ukukhula kwemakethe okubikezelwe kwe-skincare kungama- $ 20m emhlabeni jikelele.
Ngo-2018, i-skincare kwakuyiso isigaba esasihola phambili, sabalwa cishe ngamaphesenti angama-39 emakethe yomhlaba.
Imikhiqizo yokunakekelwa kwezinwele yakha amanye amaphesenti angama-21, kanti ama-make-up abalwa ngamaphesenti ayi-19 ngonyaka we-2018.
Isabelo esenzelwe ukwakheka semakethe yezimonyo emhlabeni wonke siyi-40% enkulu.
Kuyacaca ukuthi kunesidingo esikhulu emkhakheni wezempilo nobuhle. Manje yisikhathi esifanele sokuqala i-franchise yezempilo nobuhle.
Ngabe lezi zibalo zibonisa ini ngomkhakha wezempilo nobuhle?
Sekukonke lezi zibalo zikhombisa ukuthi imboni yezempilo nezobuhle iyithuba elithembisayo kakhulu lesizinda samakhasimende esikhulu futhi esihlukile ofuna ukukhangisa ngaso ikakhulukazi emphakathini wabantu asebekhulile. Ngoba batholwe bachitha impela masonto onke nonyaka emikhiqizweni yobuhle nasekwelashweni. Ngakho-ke ikakhulukazi ongakususa kulezi zibalo ukuthi imboni ihlala ibonisa izimpawu zokukhula komnotho futhi ibikezela isibikezelo esithembisayo kunoma ngubani osemkhakheni wezobuhle noma wezemfashini.
Yiziphi izinhlobo ezahlukahlukene zamathuba we-franchise yobuhle?
Kunezinhlobo ezimbili ezingena emkhakheni wobuhle jikelele. Okokuqala kukhona imboni yezemfashini eletha isamba esikhulu semali minyaka yonke ngezinto ezifana nezesekeli, izingubo, amasudi. imikhiqizo enjengale nokunye. Okwesibili unayo imboni yobuhle okuyimikhiqizo efana nemikhiqizo yezinwele, zokwelapha nge-spa nezinto ezizungeze leyo migqa. Ngakho-ke kufanele ukhethe ukuthi yiluphi ocabanga ukuthi lungaba ngcono kuwe nomsebenzi wakho. Isibonelo uma unomlando wokumodela imboni yemikhiqizo yobuhle ingathandeka kuwe njengendlela yomsebenzi.
Thola ubuhle bakho obuhle kakhulu e-Franchiseek International.